कसरी आईफोन X मा ब्याट्री प्रतिशत हेर्नुहोस् आईफोन समाचार
नयाँ आईफोन एक्सको "निशान" निस्सन्देह त्यस्तो चीजलाई हटाउन सकिदैन किनकि यसले उपकरणको डबल क्यामेरा र सेन्सर राख्दछ, यो त्यस्तो चीज हो जुन निस्सन्देह हामीसँग स्क्रिनको माथि र केसमा भएका आइकनहरूको प्रदर्शन सीमित गर्दछ। दायाँमा अवस्थित ब्याट्रीले हामीलाई अनुमति दिन्छ संख्यामा प्रतिशत बिना नै «स्ट्याक of को आइकन मात्र हेर्नुहोस्.
त्यसकारण हामी यो आंकडा हेर्न सक्षम हुनु पर्ने तरिकाहरूमा हेर्दैछौं र केवल एक मात्र त्यस्तो आईफोनमा सामान्य छैन। र यो यो कि सामान्यतया विकल्प जुन हामी अहिले सक्रिय छौं १० औं वार्षिकोत्सव मोडेल बाहेक सबै आईफोनमा पहुँच गर्नु हो सेटिंग्स> ब्याट्री र ब्याट्री प्रतिशत सक्रिय गर्नुहोस्, नम्बर स्क्रिनमा देखा पर्दछ र त्यो हो। आईफोन एक्सको मामलामा यो सीमित स्थानका कारण सम्भव छैन, तर हामी यो फिगरलाई छिटो र सजीलै देख्न सक्दछौं।
यस ब्याट्री प्रतिशतलाई आईफोन एक्समा कसरी हेर्ने
खैर, यी नयाँ आईफोन एक्स मा ब्याट्री प्रतिशत हेर्न को लागी नियन्त्रण केन्द्र बाट पहुँच को रूप मा सरल छ। यसको लागी हामी केवल माथि दायाँ कुनाबाट तल स्वाइप गर्नुपर्दछ स्क्रीनको केवल ब्याट्री आइकनको माथि र ब्याट्रीको बाँकीको वास्तविक प्रतिशत आंकडामा देखा पर्नेछ। हामीले केहि पनि सक्रिय गर्न आवश्यक पर्दैन, केवल हाम्रो नियन्त्रण केन्द्रबाट।
यो यस्तो हो र यस्तो लाग्दैन कि यो निकट भविष्यमा परिवर्तन हुनेछ, तर हामी यसलाई अस्वीकार गर्दैनौं कि एप्पलले जोड्न वा सोच्ने सम्भावनाको सीधा सम्भावना थप्ने सोच्दछ। प्रतिशत आइकनमा ब्याट्री प्रतिमा परिवर्तन गर्नुहोस्। सम्भवतः जेलब्रेकको साथ यो सम्भव हुने थियो, तर सिद्धान्ततः हामीले के वर्षौं पहिले हामीलाई दिएका थियौं।
हामीसँग एकै समयमा दुबै आइकनहरू थप्न विकल्प नभएको कारण स्पष्ट छ: भौतिक स्थान को अभाव। र यो यो हो कि नयाँ एप्पल फ्ल्यागशिपको स्क्रिनमा यस ट्याबलाई निउच भनिन्छ जुन आईफोन as,,, आदि जस्ता आइकनहरू थप्न रोक्दछ। जब हामी प्रतिशत हेर्न चाहन्छौं, हामीले नियन्त्रण केन्द्र पहुँच गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन टर्मिनलहरू » आईफोन एक्स » कसरी आईफोन X मा ब्याट्री प्रतिशत हेर्नुहोस्
के आईक्लाउड सक्रियता आईओएस ११.१ मा सम्झौता गरिएको छ? यस्तो देखिन्छ